लोडसेडिङ – Himalaya Television
फेरि शुरु भयो लोडसेडिङ, तालिका सार्वजनिक
५ माघ २०७७ जुम्ला । मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रले लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गरेको छ । टुँडिखेल, बाहिनी, महतगाउँ, मिचा, गैरागाउँ र हस्पिटल क्षेत्रमा दिउँसो १२ बजेदेखि दिउँसो साढे १२ बजेसम्म र राति...
१९ पुस २०७७ सिमकोट । हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा दैनिक ११ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा एसइई तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई बढी समस्या बनाएको छ । चर्काे लोडसेडिङले आउने जेठमा एसइई तयारी गर्नका लागि सिमकोटमा ट्युसन पढ्न आएका विद्यार्थीसहित सदरमुकाम सिमकोटवासीको दैनिकीमा समस्या...
कसले हटायो लोडसेडिङ ? कुलमान की ओली ? (भिडियोसहित)
१७ पुस २०७७ काठमाडौं । अहिले दैनिक जसो बत्ती जाने क्रम बढेको छ । विद्युत प्राधिकरणले अघोषितरुपमा लोडसेडिङ गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । ४ वर्षअघि लोडसेडिङ हटाएर वाहीवाही कमाएका प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अहिले धेरैले सम्झिन...